အသစ်က neraznoshennoy ဖိနပ်ကနေအရည်ကြည်ဖုဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အသစ်က neraznoshennoy ဖိနပ်ကနေအရည်ကြည်ဖုဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်ရုံကအဖြူ သာ. ကောင်းသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းဖူးတီးရီးယားရောဂါပိုးအင်္ဂတေကပ်ရန်ရှိသည်။ အလွန်ကောင်းသောအကူအညီနဲ့, သငျသညျ, အနည်းငယ်မျှသာအီနှင့်တကွ, ဖိနပ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သောနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်။
ပေါင်းစုကောင်းကောင်းလျှောက်တွင် Pre-ဖြတ်, ညဥ့်အကျော်အရွက်မှာပြောင်းဖူးမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီနည်းလမ်းကိုသူတို့ပျော့ပြောင်းအဟောင်း calluses, သင့်လျော်သည်။
ရှိရာသို့ သွား. နှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောလတ်ဆတ်သောကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အကျော် prichm ကူညီပေးသည်, ထိုနာတာရှည်အတွက် perebintovyvaem ။ ကျနော်တို့နံနက်ယံ၌, ညဉ့်အဘို့ချန်ခြွင်းနှင့်အမဲဆီပြောင်းဖူးကလေးမုန့်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတတန်းအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာအဘို့ပြုနေသည်။ နာကျင်လတ်ဆတ် calluses မှ 20-30 မိနစ်တခုတခုအပေါ်မှာ application အဖြစ်ကုန်ကြမ်းအာလူးပါးလွှာချပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လတ်ဆတ်ဖြင့်အစားထိုးထိုအခါ blackened အချပ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာ။
ငါဆရာဝန်များကဖောက်ပြောင်းဖူး, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ပေါက်ထောက်ခံကြဘူးငါသိ၏။ အဆိုပါအရည်ကြည်ဖုကနေအရည်၏မှန်ကန်သောဖယ်ရှားရေးပေါ်မှာရှိသမျှလုပ်ရပ်များအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ငါအမဲဆီမုန့်နေချိန်မှာလည်းအနာကိုငြိမ်းစေသည့်အရည်ကြည်ဖုပြီးနောက်အရေပြားပျော့ပြောင်းမှဘယ်မှာ t ကိုအမဲဆီမုန့်ရာအရပ်၌ဖိနပ်နှင့်အရပ်ဌာနကြောင်း add ချင်တယ်။
ပြောင်းဖူးတင်းကျပ်စွာဖိနပ်ဝတ်ထားကြောင့်ထနှင့်မျှမသင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု၏အမှု၌တည်၏။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကခြေချောင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာ။ ပြောင်းဖူးမကြာခဏရောင်နှင့်ပိုဆိုးရွားလာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးပြုအလှပြင်ဆိုင်မှာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှာ, သင်ပြောင်းဖူးအဲ့သည့်ကိုသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်ဆီထည့်နိုင်ပြောင်းဖူးအဆိုပါ patch ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ခန့်အပ်တာဝန် vrachom.Pered ကိုဆိုလိုသည်, ထိုဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ဆိုဒါဖြေရှင်းချက်ငွေ့ကိုကောင်းစွာဖြစ်သင့်သည်။
neraznoshennoy ဖိနပ်အပေါ် Calluses ဦးပထမဦးဆုံးလက်အားလုံးနီးပါးကအကြောင်းသိတယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်မှလူသိများဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို။
Для лечения мозолей отлично подходят ванночки из овса. Также прекрасно помогает ရှောကျသီး. Для этого нужно срезать вершок ရှောကျသီး с мякотью, наложить на мозоль и замотать бинтиком.
ပြောင်းဖူးတွင်သင်သည်ရှားစောင်းလက်ပတ်အတွင်းဘက်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဝတ်နိုင်ပါသည်, ဒီကုသမှုဒဏ်ငွေဟောင်းရှိရာသို့ သွား. နှင့်အတူကူညီပေးသည်။
ကြက်သွန်များ cut ချပ်အိပ်ရာရှေ့တော်၌ထိုပြောင်းဖူးမှလျှောက်ထားပြီးပတ်တီးနှင့်အထုပ်အတူတက်လှိမ့်ထားရပါမည်။
ကုန်ကြမ်းအာလူးလည်း, ပြောင်းဖူးဖို့လျှောက်ထားတဲ့ grater အပေါ်ပွတ်နှင့် mozolke ဖို့ slurry လျှောက်ထားနေကြပါတယ်။ ထိပ်တွင်ပလတ်စတစ်အိတ်နှင့်ပတ်တီးထားတော်မူ၏။
ယင်းပူဖောင်းကွဲမမူလျှင်ပထမဦးစွာသင်ကအရမ်းဖိနပ်၏အချိန်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒုတိယအပင်ဒဏ်ရာရသူခြေထောက်ထိခိုက်လျက်နှင့်မပါဘူး, ကမြုံနှင့် smear မုန့် Boro ပေါင်းပြီးဆေးထိုးအပ်ထိုးဖောက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ (ဒါဟာကုသခန်းခြောက် .. )
При появлении мозолей нужно сделать тплую ванночку для ног минут на 10 — 15 с добавлением соды (2 столовые ложки), отвара ромашки (0,5 стана) и двух столовых ложек оливкового масла.
ထိုအခါသူ့ခြေရင်းသုတ်ဖို့ပဝါနဲ့အတူခန်းခြောက်။ အရက်, ဆေးထိုးအပ်နဲ့ကုသပြောင်းဖူးအရက်နှင့်ထိုးဖေါက်ခြင်း၏ဧရိယာဆက်ဆံပါ။ ဂရုတစိုက်အရည်, အမဲဆီ zelnkoy ကိုဖယ်ရှားကာအင်္ဂတေတက်ကိုပိတ်ပါ။
အသစ်ကဖိနပ်ကနေပြောင်းဖူးပေါ်လာလျှင်, ငါအခြောက်လှန်းအရက်နှင့်လေကြောင်းနှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်သူတို့ရဲ့အသားအရေဖော။ သူတို့ပြီးသားကွဲကြလျှင်, ငါသည်သူတို့၏တီးရီးယားရောဂါပိုးအင်္ဂတေကျော် taped ။
ငါနောက်ဆက်တွဲပွတ်တိုက်မှု wear များအတွက်မြေပြင်ပြင်ဆင်နေငါဖိနပ်။ အရည်ကြည်ဖုအရက်တိုင်အောင်စိုကြောင့်နာရီဝက်ဖိနပ်ကို double ခြေအိတ်ပေါ်အိမ်တွင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဝတ်ထားပြီးနောက်။ ကျွန်မအနေဖြင့်အဘို့ထိုသူတို့သွားပါ။ အဆိုပါနောက်ခံအောက်မှာဘာမှခိုင်ခံ့လျက်, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသားအရေထိခိုက်ဖို့မသကဲ့သို့ဒီတော့ငါခဏသွားပါ။
ကြောင်းသစ်ကိုဖိနပ်နှင့်သားရေလျှင်လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ, သင်က damp အထည်သို့မဟုတ်စိုစွတ်သောခြေအိတ်နှင့်အတူငယ်နိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကိုအရေပြားပျော့ပျောင်းစေသည်များနှင့်အရည်ကြည်ဖုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပေမည်။
တစ်ဦးကအားရစရာ? ဒါဟာအဆိုးဆုံးမှာသိက္ခာချခြင်းနှင့်အထူးမုန့်သို့မဟုတ် Vaseline မှကပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
Posted in, ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ
27 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,357 စက္ကန့်ကျော် Generate ။